Otu esi etinye MariaDB 10.7 na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Wụnye MariaDB 10.7 na Debian
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye MariaDB 10.7 na Debian 11 Bullseye.
Na-esote, gbanye nhọrọ 2 wee gaa n'ihu na akụkụ ntinye.
Nhọrọ nke abụọ na ikekwe masịrị ya bụ iji script bash gọọmentị n'ihi na mmelite ọ bụla ga-adị ngwa ngwa ozugbo ebuga ya na ebe nchekwa gọọmentị. Ndị ọrụ na-anọghị nso na sava ha nwere ike chere nsogbu ụfọdụ ihu, mana nke a agaghị abụ nsogbu maka ọtụtụ.
Rịba ama, maxscale na ngwá ọrụ awụsara. Ị nwere ike wepu ọkọlọtọ ndị a, mana n'oge ugbu a, anaghị akwado ngwaọrụ maka Debian 11. Ọtụtụ ndị ọrụ agaghị achọ mgbakwunye ndị a.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ụdị MariaDB 10.7 kachasị ọhụrụ na ntọhapụ kwụsiri ike ọhụrụ Debian 11 Bullseye.